IMac Pro-ka cusub wuxuu la socdaa cufan Apple T2 ah oo loogu talagalay amniga kombiyuutarka | Waxaan ka socdaa mac
IMac Pro-ka cusub wuxuu la yimid cufan Apple T2 ah oo loogu talagalay amniga kombiyuutarka
Javier Porcar | | iMac
Waxaa la ogaa in barnaamijka loo yaqaan 'iMac Pro', oo aan ka ogaan doonno faahfaahin dheeri ah laga bilaabo berri, maalinta la bilaabayo, wuxuu yeelan doonaa qalab loo yaqaan 'Apple chip', oo loogu talagalay in lagu hagaajiyo amniga howlaha Mac qaarkood. , kaas oo la baabtiisay Tufaax T2, waxay u adeegtaa sidii meel aamin ah oo loogu talagalay furayaasha la xareeyay, faragelinta geeddi-socodka kabaha iyo xakamaynta kamaradda, codka iyo disk-ka laftiisa laftiisa. Waxaan ognahay faahfaahinta gacanta ka Kaleb Sasser, A-aasaasaha horumariye Argagax. Apple waxay ku soo bandhigtay nidaamkan MacBook Pro, oo leh Apple T1 chip.
Waxa Apple ku talajirto jabkan ayaa ah go'doomiyaan qaar ka mid ah macluumaadka 'xasaasiga ah' qol ka duwan nidaamka intiisa kale. Sidan oo kale, marin u helisteeda ayaa ka dhib badan nidaamka intiisa kale. In kasta oo waxa ugu caansan ee adeegsadayaasha celceliska ahi ay yihiin ilaalinta macluumaadka xasaasiga ah, sida furaha sirta ah, qormadan ayaa sidoo kale sirta qalabka, sida aan uga barannay Sasser. Isaga laftiisa ayaa tweeted ku saabsan:
Qalabkan cusubi wuxuu ka dhigan yahay in furayaasha keydinta keydinta ay ka soo gudbayaan meel ammaan ah oo loo maro mashiinka wax lagu qarinayo qalabka: furaha waligiis kama baxo qarka ... oo wuxuu u oggolaanayaa xaqiijinta nidaamka qalliinka, kernel, bootloader, qalabka qalabka. (Tani waa naafo noqon kartaa)
Isticmaalayaasha IMac Pro waxay u habeyn karaan ficilada Apple T chip sida ay u jecel yihiin2, doorbidida. Xaaladdaas, isticmaaleyaashu waxay dejin karaan lambarka sirta ah, si looga hortago Mac inuu ka bilaabo wadista dibedda.
MacOs waxay leeyihiin ikhtiyaarro bootooyin cusub oo ammaan ah. Waxaan leenahay seddex miisaan: Amni buuxa, Amni dhexdhexaad ama amniga gab. Haddii aan dhaqaajino amniga buuxa, nidaamku wuxuu socodsiiyaa oo keliya barnaamijkii ugu dambeeyay uguna amniga badnaa.
Ma sugi karno inaan aragno astaamo kasta oo qarsoon ee iMac Pro cusub saacadaha soo socda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Kombiyuutarada Mac » iMac » IMac Pro-ka cusub wuxuu la yimid cufan Apple T2 ah oo loogu talagalay amniga kombiyuutarka
Deus Ex: Bini-aadamka Waa loo Qaybiyay hadda oo loo heli karo macOS